पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन ! २०७६ साल साउन १० गते शुक्रबार, आज तपाइको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस राशिफल – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /Banner news/पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन ! २०७६ साल साउन १० गते शुक्रबार, आज तपाइको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस राशिफल
पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन ! २०७६ साल साउन १० गते शुक्रबार, आज तपाइको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस राशिफल
आज श्री शाके १९४१ बि.स.२०७६ साल साउन १० गते शुक्रबार इश्वी सन २०१९ जुलाई २६ तारीख श्रावण कृष्णपक्ष नवमी त्तिथी भरुणी नक्षत्र शुल योग पश्चात गण्ड योग वणिज करण चन्द्रमा मेष राशिमा आनन्दादि योगमा मुद्गर योग सुर्य दक्षीणायन बर्षा ऋतु – ज्यो.प. सरोज घिमिरे
मेष राशि – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ गरीरहेको कार्यका क्षेत्रबाट आफन्तजनहरुको मन जित्न सकिनेछ । सभा सम्मेलनजन्य कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ । पारीवारिक साथ सहयोग द्वारा ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला । स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानि उत्तम साबित रहनेछ ।
बृष राशि – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बोकार्यसम्पादनमा झन्झट हुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । नयाँ योजनाका साथमा गरीएका कामहरु सफल हुनेछन । मनोबिलासिताका सामानहरुमा सामान्य खर्चहुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । खराब संंगतको कारणले कार्य क्षेत्रमा सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । प्रतिपक्षीहरुको बृद्धिहुनाले कार्य सम्पादनमा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला ।
मिथुन राशि – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हमेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । नयाँ मित्र सगँको भेट वा प्रिय खबरले मन प्रशन्न रहनेछ । तपाईको सानो कमजोरीको फाईदा अरुले लिन सक्ने छन । नयाँ कामको थालनिले मन प्रशन्न रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहनेछ ।
कर्कट राशि – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डोआफ्नो कुसलताले गर्दा आम्दानिको क्षेत्र सबल रहने छ । आफन्त जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पुग्नेछ । प्रिय खबरले मन प्रशन्न रहनेछ । सभा सम्मेलनमा सरीक हुने अबसर प्राप्त हुनेछ । पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा सामान्य तनाब उत्पन्नहुनेछ ।
सिंह राशि – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टकार्य सम्पादनमा ढीलाई हुनाले सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । मान्यजनको सहयोगमा गरीएका कार्यले दीगो फाईदा दिलाउनेछ । अरुको बसमा गरीएको कार्यले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुनेछ । लगानिको क्षेत्रमा सजग रहनु पर्ने दिन रहेको छ । कार्य सम्पादनमा गोप्यता आवश्यक रहनेछ ।
कन्या राशि – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पोखानपान मा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । मान्य जनको साथ सहयोग पुर्ण रुपमा प्राप्त नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ । शारीरिक आलस्यातले गर्दा गरीरहेको काम को क्षेत्रमा अपजस सहनु पर्ला । पारिवारिक झोर झमेलाले सताउन सक्नेछ ।
तुला राशि – र,रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, तेसामान्य कार्यमा अधिक श्रम र समय ब्यतित हुन सक्नेछ । बिलासीताका सामानको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । प्रेमी प्रेमिकाको बिच सामान्य मनमुटाब रहन सक्छ । तपाईले कसैमाथी गरेको बिश्वासमा बिश्वसघात हुन सक्छ । ब्यपार ब्यवसायमा साजिदारी त्यति उत्तम नरहला ।
बृश्चिक राशि – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, युस्वास्थ सम्बन्धि सामान्य असर भोग्नु पर्ला । आजको सामान्य खर्चले भोलिलाई फाईदा मुलक हुनेछ । मनमा चन्चलताले बास गर्नाले सहि निर्णय गर्न नसकीएला प्रतिस्पर्दाजन्य कार्यमा सजग रहनु उत्तम रहनेछ । प्रिय ब्यक्ति को भेटले मन प्रशन्न रहला । यात्रामा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ ।
धनु राशि – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भेबिद्या तथा सन्तान शुख प्राप्ति हुने योग रहेकोछ । सामान्य अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । बौधिक क्षेत्रको बिकाशले तपाईको मान सम्मानमा बृद्यि गर्नेछ । कार्य क्षेत्रको गडबढीले गर्दा मनमा सामान्य डरको बास रहनेछ । पुराना मित्रजनहरुसगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ ।
मकर राशि – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गिपरीश्रम अनुरुप फल प्राप्ति नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनसक्छ । सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान लिनु होला । तपाईको प्रगतिमा आरीस गर्ने हरुबाट बच्नु पर्ला । आम्दानि क्षेत्र भने मध्यम रहनेछ । पारीवारिक साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मद्दत पूग्नेछ । स्थीर क्षेत्रमा लगाइएको लगानिको दिर्घकालिन फाईदा प्राप्त रहनेछ ।
कुम्भ राशि – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, दब्यापार ब्यवसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोग मा समय ब्यतित रहन सक्छ । मित्रजनको साथ सहयोग भरपुर प्राप्त रहनेछ । मानसिक चन्चलताले गर्दा कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । मान्यजनहरुको मार्गदर्शन निकै फाईदाजनक हुनेछ ।
मीन राशि – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चिसाजेदारी काममा लगानी नगरैकै बेश हुनेछ । बोलिको कारण आफन्तजनहरु रुष्ट रहन सक्छन् । मित्रहरुको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि आई पर्न सक्नेछ । नजिकका ब्यतिहरुबाटै सामान्य धोका हुन सक्नेछ ।
ओली सरकारकी कान्छी मन्त्री मगरले किन ल्याउन सकिनन् उपत्यकाबासीलाई मेलम्चीको पानी